Somaliland: “Waxaanu Ka Digaynaa;- Dulqaadka Dadku Wuu Soo Yaraadaa Oo Ninka Fulayga Ah Hadaad Erido Erido Uun Maalin Uunbuu Kugu Soo Jeedsan Doonaa” Xildhibaan Cabdiqaadir Jirde. - Wargane News
Home Somali News Somaliland: “Waxaanu Ka Digaynaa;- Dulqaadka Dadku Wuu Soo Yaraadaa Oo Ninka Fulayga...
Gudoomiyaha ku meelgaadhka ah ee xisbiga Waddani Xildhibaan Cabdiqaadir Ismaaciil Jirde ayaa sharci daro ku tilmaamay xukunka Maxkamada Gobolka Hargeysa ay maanta ku riday laba sarkaal oo ka tirsan Xisbiga Waddani oo in mudo ah si sharciga baal marsan u xidhnaa.
Mr Jirde waxa uu tilmaamay in xeer-ilaalintu aanay keenin Maxkamada cadayn ku filan qodobka 321aad ee Xeerka Ciqaabta Guud (XCG) ee lagu xukumay hal sano Yoonis Axmed Yoonis, halka Maxamed Sidiiq Dhame oo wax dambiya Maxkamadu ku wayday ay Xeer-ilaalintu racfaan ka qaadatay isla markaana ay doonayso in mudo xabsiga ay ku sii haystaan.
Gudoomiyaha ku meelgaadhka ah ee xisbiga Waddani Mudane Cabdiqaadir Jirde waxa uu sidaasi ku sheegay mar uu maanta u waramay Warbaahinta kadib markii xukunku ku dhacay labadaasi sarkaal ee ka tirsan xisbiga Waddani, waxaanu Mr Jirde xukuumada Madaxweyne Siilaanyo uga digay inay joojiso xadhiga sharci darada ah, dadka iyo dalkana ay u tudho.
Cabdiqaadir Jirde oo arintaasi ka hadlayaana waxa uu yidhi “Waxa maanta oo taariikhdu ay tahay 21-ka May 2017-ka Maxkamada Gobolka Hargeysa ku dhawaaqday xukunkii laba masuul oo xisbigan Waddani ka tirsan oo aanu u aragno in sharci daro lagu xidhay oo masuuliyada ay xisbiga u hayeen aawadeed iyo waajibkoodii ay gudanayeen dambi looga dhigay.
Saraakiisha xisbiga Waddani oo in muddo ah ku xidhnaa kuna eedaysnaa qodobada 321, 322 XCG, waxa ay maxkamadu eedii ay ku eedaysnaayeen ku wayday eedaysanihii koowaad Maxamed Sidiiq Cabdilaahi (Dhame), halka ay sheegtay inay Yoonisna ku heshay dambi ka horimaad sharci.” Ayuu yidhi Xildhibaan Cabdiqaadir Jirde, waxaanu intaasi ku daray “Way cadaatay in Xeer-ilaalintu aanay keenin cadayn ku filan qodobka 321aad ee Xeerka Ciqaabta Guud (XCG) ee lagu xukumay Yoonis, qodobkaasi qawaaniinta sharcigu wuxuu farayaa in aanan haba yaraatee shaki la’aan in la isku qanciyo in falkaa uu galay duruuf (without reason about that) cadayn buuxda oo taam ah oo lagu qanci karo oo lagu bogsan karo waa qodobkaas oo maxkamadu may keenin laakiin way iska indho tirtay. Sidoo kale Maxkamadu may sheegin wax cadayn ah oo sababtay in qodobkaasi lagu xukumo Yoonis Axmed Yoonis, tafsiirka qodobkaa (without reason about doubt) wax kale oo ay iskaga indha tirtay oo ay cuskatay oo ay kaga gudubtay Principle-kaa may sheegin.
Xafiiska Xeer-ilaalintu wuu ka sii warqabay xukunka Maxkamadu soo saarayso waxaana cadayn u ah markii Maxkamadu Bixisay Amarka siidaynta Maxamed Sidiiq oo qoraal ah waxay soo gudbiyeen ogayn Racfaan ah oo ay ku sheegayaan inay racfaan ka qaateen xukunka oo mudo siihayntiisa diyaarna u ahaa.
Waxa cadayd oo garyaqaanadii u doodayey eedaysaneyaashu ee meesha fadhiyey sheegeen in Xeer-ilaalintu racfaan shaabadaysan oo hore looga sii qabtay xukunkii oon xaakimka afkiisa ka soo wada dhamaan oo markuu yidhi waa dhantahay ay gudbiyeen, taasina waxa ay ku tusinaysaa inay xukunka ka sii warqabeen oo ay ka sii diyaargaroobeen. Waa in Maxamed Sidiiq Xoriyadiisa loo soo celiyo oo la sii daayo oo ay doonayaan inay mudo ku sii hayaan.
Waxa muuqata in xadhiga Masuuliyiintaasi yahay mid siyaasadaysan oo wax xadhig ah oo ay eeda ku mutaystaan lama keenin Maxkamada horteeda iyo cadayn ku filan, waxaanu u aragnaa xadhigooda xadhig siyaasadeed balse faldambiyeed ay ku kaceen oo qarankan ay khalkhal ku galiyeen oo ay dad ku kiciyeen oo ay ummadda isku direen, oo ay iska hor keeneen Maxkamada lama hor keenin, markhaatiyadoodiina may cadayn. Markaa waxaanu ummadda u sheegaynaa in balanqaadkii ay xukuumadu noo qaaday ee Madaxweynuhu kow ka ahaa anaga wali xagayaga wuu ka jiraa balanqaadkii aanu qaadnay oo anaga oo umadda u tudhayna rabshadna samayn mayno dalkana gilgili mayno, xadhigaa iyo tacadigaa waxaanu u maraynaa intay qawaaniintu noo ogoshahay balse waxa aanu ka digaynaa dulqaadka dadku wuu soo yaraadaa oo ninka fulayga ah hadaad erido erido uun dee maalin uunbuu kugu soo jeedsan doonaa, bal fulaygaa la eryayo ayaanu nahaye red line ayaa jiree bal yaan nala gaadhsiin uun hadii kale waanu soo jeedsan doonaa, markaanu soo jeedsanana, waa la iskala baxayaa qaynuunka marka maalin walba lagu eryado ee aad dulqaadato eed tagto eed dulqaadato, intaa inteeda ayaanu ka sugaynaa iyagana inay gartaan oo dalka iyo dadka ay u tudhaan” ayuu yidhi Mudane Cabdiqaadir Jirde.